Wasiir Cabaas Oo Maanta Aas Qaran Loo Sameynayo | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Wasiir Cabaas Oo Maanta Aas Qaran Loo Sameynayo
Muqdisho (Hubaal) Aas qaran ayaa maanta lagu wadaa in loo sameeyo wasiirkii wasaaradda Howlaha Guud iyo dib u Dhiska marxuum Cabaas Cabdullahi Siraaji oo xalay si aan wali sharrxaad buuxda looga bixninin ay askar ka tirsan dowladda tooagasho ugu dileen magaalada Muqdisho.
”Waxaan ku amray hay’adaha ammaanka inay si dhakhse leh baadhitaan ugu sameeyaan masiibadan foosha xun. Waana in kuwii ka dambeeyay la horkeenaa caddaaladda”, ayuu madaxweynuhu ku qoray bartiisa Twitter-ka.
Wasiir Siraaji oo sidoo kale ahaa Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka Federalka Somaliya ayaa laga soo doortay deeganada Jubbaland, isaga oo doorashadii Xildhibaanimada kaga adkaaday wasiir hore
War qoraal ah oo ka soo baxay Jubbaland ayaa loogu baaqay dowladda Federaalka inay baadhitaan baahsan ku sameyso dilkaas, isla markaana la soo bandhigo wixii ka soo baxa baaritaankaas.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo booqday isbitaalka la geeyay meydka wasiirka xalay, ayaa tacsi u diray qoyska uu ka geeriyooday iyo shacabka Soomaaliyeed.
Cabaas oo 32 sano jir ahaa ayaa la sheegay inuu ahaa wasiirka ugu d’ada yar wasiirada xukumadda cusub. Wuxuu ka mid ahaa qaxootigii ku soo barbaaray xerada qaxootiga ee Dhadhaab.